Creative Writing » အီကိုကျကျ ဒီဇိုင်းအလှ (Part 2) – ဗီရိုရှေ့ကို သွားကြမယ်။	26
အဝတ်အစားကတင်ကို ဘယ်၂ ပိုင်း သွားမယ် မသိ။ ပြောချင်သလောက် ပြောနိုင်သလောက် တဖြေးဖြေးသွားကြတာပေါ့။ အမျိုးသမီးတိုင်း ကြုံဖူးမှာပါ။ ဝယ်ထားတာတွေလည်း အများကြီး၊ ဗီရိုကလည်း ပြည့်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ အရေးဟယ်အကြောင်းဟယ်ဆို ဘာဝတ်ရမှန်းမသိ။
ကိုယ် အရင်က ဘာတွေကို မုန်းဖူးလဲသိလားး??? ဇာနဲ့ ပါတိတ်၊ ဇာနဲ့ချိတ်၊ ပိတ်ဖောက်နဲ့ ပါတိတ် လောက်ကိုကို ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာ ပြင်ချင်နေတာ။
ကျော်လွင်ဖြိုး says: ခုခေတ် ခေးမယေးဒေ ဝတ်နေကြတဲ့ စွပ်ကျယ် သေးသေးလေးတွေ နဲ့ ဇီးရိုး ကွာတား ဘောင်းဘီ တွေ အကြောင်းလဲ အလင်းပြဘာ မမဂျီးစ် :P
မမချွိ says: အီကိုကိုက်ပေမဲ့ အီဖေကို တို့ နဲ့ မကိုက်ရင် အလင်းမပြနိုင်ဘုကွဲ့။
ကျော်လွင်ဖြိုး says: အကို တို့ နဲ့ ကိုက်တယ်လေ
မမချွိ says: အကိုတို့အတွက်က နောက်လာပါ့မယ်။
Was this answer helpful?LikeDislike 3924
weiwei says: ရုံးယူနီဖောင်း ၅ ရက် ၀တ်ရတဲ့အတွက် အ၀တ်အစားကိစ္စ ခေါင်းကိုက်တာ တော်တော်သက်သာသွားတယ် ..
မမချွိ says: ကျနော် ဆိုရင်တော့ ရိုးရာထည် ကောင်းကောင်းသန့်သန့် ဝမ်းဆက်ပဲ ပဲ ဝတ်မယ်။
weiwei says: အင်း .. နောက်ထပ်ဆိုးတာတစ်ခုက လူမှတ်မိလွယ်တော့ ဒါဝတ်ပဲ ဖြစ်နေပြန်ရောပေါ့ .. ဖေ့ဘုတ်ခေတ်မှာ ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ် ..
Kaung Kin Pyar says: ရှပ်အကျီင်္ကြိုက်တယ်….။ စကဒ်ထဲထည့်ဝတ်ဝတ် ဘောင်းဘီနဲ့ တွဲဝတ်ဝတ် အဆင်ပြေတာမို့….
လည်ပင်းကျကျ အသားဖားဖားလေးတွေလဲ ကြိုက်တယ်….။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးရှိပြီး… အပြင်ဝတ် ရုံးဝတ်ရတာမို့…။ ခုနောက်ပိုင်းကို အဲ့လိုလေးတွေ အဓိက ရှာဖြစ်နေတယ်…။ ခုနောက်ပိုင်း ကြိုက်မိတာ… ဘောင်းဘီ ဒူးပေါ်လောက် ဒဲ့အနည်းငယ်မသိမသာပွ နဲ့ အပေါ်က စပို့တ်ရှပ်၊ တီရှပ်ဝတ်ရတာ.. ခိ (အသက်ကြီးမှ ပြန်ငယ်ချင်နေတာ… )
ဂါဝန်တိုလေးတွေတော့ မြင်မိရင် ချစ်သားး။ ခုထိတော့ ၀တ်ဖို့ မရဲနေသေးဘူးရယ်…။ ခြေထောက်တွေက အရမ်းလှတာမို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
Kaung Kin Pyar says: ခိ.. စမီးက ဂျပု… (ကြုံတုန်း ၀င်ကြွားထှာ..) အိုက်လို ဘောင်းဘီမျိုးဆို အတော်ရွေးရတယ်… ။ လိုတာထက် ပိုပွသွားရင်လဲ ကင်ပေတိုင် နဲ့ တူသွားရော…။
အမဲလေးတစ်ထည်လား.. လောက်လောက်လားလားရှိတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: စမီးက တဆက်တည်း ဝတ်ရတဲ့ ဟာမျိုးတွေ ရှာရမှာ။
Kaung Kin Pyar says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
hmee says: စပို့ရှပ်က ကောက်စွပ်ရုံ အထဲက အတွင်းခံ စဉ်းစားစရာမလိုလို့ ( အကျပ်ဆို အတွင်းခံက ခါးရှည်ဝတ်ရတာကိုး ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိ) ကြိုက်တယ်။ ၄ကွာတားနဲ့ ၀တ်ဝတ် အရှည်လည်းရ အတိုလည်းလိုက်လို့ အရောင်ကြိုက်ရင် ၀ယ်တယ်။ စကပ် ဖါးဖါးရှည်ရှည်တော့ သူများဝတ်တာ ကြိုက်လှ ကိုယ် စမ်းဝတ်ကြည့် အတော်ကို ပုံဆိုးဆိုး။ ဇီ ပြောသလို ဂါဝန်ဖားဖား ဒူးအောက်ကို အပေါ်က အနွေးထည် အရှည်ဝတ်ပြီး ၂ခုတွဲပြီး အပေါ်က ခါးပတ်ပတ်တာလှတယ်။ သားကျောင်းက ဆရာမ ၀တ်ထားတာတွေ့လို့။ အမမှာက ဂါဝန်က မရမ်းခေါ်မလား ခရမ်းခေါ်မလား ခပ်ပုတ်ပုတ် မှောင်မှောင် တထည်
မမချွိ says: အပေါ်ဝတ်ဘတ်ဂျက်မကိုက်ရင်
မြစပဲရိုး says: ကျွမ်းကျင်သူ ရဲ့ စနစ်တကျ ထုတ်နှုတ်ရှင်းပြမှု တွေကို ဖတ်သွား၊ မှတ်သွားပါသည်။ :-)))
မမချွိ says: ဟုတ်ပါ့။
မွသဲ ( 17082011 ) says: Yes အောက်ဆုံးကအကြံပေးသလိုအမြဲလုပိတယ်
မမချွိ says: အမှန်က လုံခြည် က အတွဲအစပ် ပစိပစပ်ပိုများသဗျ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမလေး
Wow says: ကိုယ့်ဘီရိုထဲရှိတာတွေလှတယ်မထင်ပဲ အပြင်ထွက်မျက်စိကျတိုင်းဝယ်ဖြစ်နေတာ စိတ်ကျရင် ဈေးပိုဝယ်ဖြစ်တယ်
မမချွိ says: ဟုတ်တယ်။
Thint Aye Yeik says: မိန်းခေး အသားပေး ပို့စ်
မမချွိ says: နာ က ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်အဝင်စားဆုံးမို့
အောင် မိုးသူ says: မိန်းခေးအသားပေးမို့ ဘာမှ သိပ်မမန့်တော့ဘူးရယ်